राष्ट्र बैंकले १० अर्बको विकास ऋणपत्र बिक्री गर्दै, बोलकबाेल कहिले ? - Arthasansar
विहीबार, १४ साउन २०७८ | Thursday, July 29, 2021
राष्ट्र बैंकले १० अर्बको विकास ऋणपत्र बिक्री गर्दै, बोलकबाेल कहिले ?
सोमबार, ०७ असार २०७८, ११ : ३८ मा प्रकाशित
नेपाल राष्ट्र बैंकले १० अर्ब रूपैयाँ बराबरकाे विकास ऋणपत्र बिक्री गर्ने भएकाे छ । बैंकले ६ वर्ष अवधिकाे "विकास ऋणपत्र २०८४ (च)" नामकाे ऋणपत्र बिक्री गर्न लागेकाे हाे । उक्त ऋणपत्रकाे व्याजदर बाेलकबाेलकाे माध्यमबाट निर्धारण हुनेछ ।
यसैगरी, उक्त ऋणपत्र बैंक तथा वित्तीय संस्था,गैर-बैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी,संगठित संस्था तथा नेपाली नागरिकले खरिद गर्न सक्नेछन् । खरिदकर्ताले राष्ट्र बैंकको राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन विभागमा आवेदन दिनुपर्नेछ । याे ऋणपत्र धिताे राखी कर्जा लिन/दिन पाइनेछ । उक्त ऋणपत्रकाे बाेलकबाेल भाेलि असार ८ गते मंगलबार अपरान्ह ३ बजेसम्म हुनेछ । असार ९ गते निष्कासन भएर उक्त ऋणपत्रकाे साँवा २०८४ साल असार ९ गते भुक्तानी हुनेछ ।
त्यस्तै, इच्छुक खरीदकर्ता प्रतिस्पर्धी र अप्रतिस्पर्धी रुपमा सहभागी हुन सक्नेछन् । प्रतिस्पर्धी खरीदकर्तालाई निष्काशित रकमको ८५ प्रतिशत अर्थात् ८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ र अप्रतिस्पर्धीका लागि १५ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ५ करोड रूपैयाँ छुट्याइएको छ ।
विकास ऋणपत्रकाे बारेमा अन्य विवरण यस प्रकारकाे छ :
माछापुच्छ्रे बैंकको ऋणपत्रमा आवेदन दिने आज अन्तिम माैका
नेप्सेमा एनएलजी इन्स्योरेन्सको सेयर मूल्य समायोजन, कतिमा खुल्छ कारोबार ?
पूर्वअर्थमन्त्रीहरुसँगको छलफलः अध्यादेश बजेटलाई प्रतिस्थापन गरेर पूर्ण बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड
खोप तालिका संशोधनमा अर्थमन्त्रीको जोडः असोजभित्र खोप दिन नदिए अर्थतन्त्र धरापमा पर्नसक्ने
मध्य भोटेकोशीको आईपिओमा पर्यो माग भन्दा बढि आवेदन, यस्तो छ पछिल्लो अपडेट
जीवन विकास लघुवित्तको आईपीओ रिजल्ट कति बजे हेर्न पाइन्छ ?
मिर्मिरे लघुवित्तको नाफा ४८१.९० प्रतिशतले बढ्यो, इपिएस कति ?
अधिक तरलता थुप्रिएपछि बैंकहरुबाट २० अर्ब उठाउँदै राष्ट्र बैंक
आइपीओ ल्याउने तयारीमा रहेको राष्ट्र उत्थानको नाफामा छलाङ, अन्य सूचक कस्ता छन् ?
सबैको लघुवित्तको खुद मुनाफा २३१.८७ प्रतिशतले बढ्यो, प्रतिसेयर आम्दानी कति ?
मौद्रिक नीति : राष्ट्र बैंकलाई व्यवसायीका यस्ता सुझाव
प्रोग्रेसिभ फाईनान्स र एसबी सल्युसनबीच सहकार्य
जीवन विकास लघुवित्तको आईपीओ डिम्याट खातामा आयो, कहिलेबाट खुल्छ कारोबार ?
जीवन विकास लघुवित्तको आईपीओ नेप्सेमा सूचिकृत, कति पायो ओपनिङ्ग रेञ्ज ?
धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष ढुंगानाद्वारा कानून विपरीत शेयरको भित्री कारोबार
हिमालयन पावर पार्टनरको सेयरमा चलखेल, एकै कारोबारमा ६.४ प्रतिशतले घट्यो सेयर मूल्य
मध्य भोटेकोशीको आईपीओमा ५१ लाख कित्ताको आवेदन, यस्तो छ पछिल्लो अपडेट
सेयर गसिपः हकप्रदको हल्लाले जलविद्युत क्षेत्र बुम बुम !
सेयरबाट कसरी पैसा कमाउने ? राकेश झुन्झुन्वालाको ५ लगानी टिप्स